के तपाइ इन्डक्सन किन्ने तयारीमा हुनुहुन्छ ? यसरी थाह पाउनुहाेस् राम्रो क्वालिटीको इन्डक्सन चुल्हो
बजारमा अनेकन मोडलका इन्डक्सन चुल्हो पाइन्छन् । त्यसका मूल्य पनि फरक फरक छन् । चिनियाँ कम्पनीका इन्डक्सन कम मूल्यमा पाइन्छ भने विशेष गरी भारतीय र तेस्रो देशमा बनेका इन्डक्सन चुल्होको मूल्य अलिक बढी पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अझै पनि ग्यासको मूल्य वृद्धि हुने क्रम जारी रहेकाले नेपालमा पनि मूल्यवृद्धि हुने सम्भावना अझै रहेको छ । यस्तो अवस्थामा उपभोक्ता इन्डक्सन चुल्होतर्फ आकर्षित हुने सम्भावना देखिन्छ ।
के हो इन्डक्सन ?
इन्डक्सन चुल्होले चुम्बकीय प्रतिक्रियाद्वारा भाँडोलाई तताउने काम गर्छ । यसको ताप सिधै भाँडामा पर्ने हुनाले भाँडो एकदमै छिटो तात्छ । ताप पनि सबैतिर समानरुपमा जाने भएकाले ग्यासको तुलनामा इन्डक्सन चुल्होमा चाँडो खाना पाक्नुका साथै राम्रो तरिकाले पनि पाक्छ । यसरी थाहा पाउनुहोस् राम्रो क्वालिटीको इन्डक्सन चुल्हो
इन्डक्सन चुल्हो खरिद गर्दा सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने विषय भनेकै त्यसको पावर हो । जति बढीको पावर हुन्छ, त्यति नै चाँडो खाना पाक्छ । सामान्यता इन्डक्सनमा १००० देखि २००० वाट क्षमता हुन्छ । बजार मूल्यका आधारमा जति बढी पावर हुन्छ, त्यति नै बढी पर्ने गरेको छ ।
बजारमा प्रयोगकर्ताको सजिलोका लागि इन्डक्सन उत्पादक कम्पनीले प्रि सेट मेन्यू पनि राखेका हुन्छन् । त्यसले कुन खाना पकाउँदा कति तापक्रम चाहिन्छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको हुन्छ । त्यसका लागि तपाईले शुरुमा कति तापक्रममा पकाउने हो, त्यसको निर्धारण गरेमात्रै हुन्छ । यस्तो सुविधा भएको चुल्हो नेपालका लागि बढी उपयुक्त हुन्छ ।
इन्डक्सन खरिद गरेको केही समयभित्र बिग्रियो भने त्यसको कुनै अर्थ भएन त्यसकारण इन्डक्सनको भित्रपट्टी रहेको क्वाइल वा अन्य उपकरणमा पानी नपस्ने खालको सुरक्षा उपकरण भएकाको खरिदमा ध्यान दिन जरुरी छ । बिभन्न अनलाइनहरूबाट साभार